Zmags: इन्फोग्राफिक दर्शक र वितरण | Martech Zone
मंगलवार, सेप्टेम्बर 25, 2012 मंगलवार, सेप्टेम्बर 25, 2012 Douglas Karr
हामी सँधै इन्फोग्राफिक्सहरू विकास गर्नमा हिचकिचाउँदछौं जुन क्षैतिज हो किनभने तिनीहरू वितरणको लागि यस्तो पीडा हुन्। हाम्रो ग्राहकहरु, डेलीभ्रा, बस एक शानदार इन्फोग्राफिक गर्नुभयो दुई ईमेलहरू तुलना गर्दछ ... राम्रो र नराम्रो। तेर्सो इन्फोग्राफिकको साथ समस्या यो हो कि यो वास्तवमा अधिकांश सामग्री रूपरेखामा फिट हुँदैन। तपाईं इन्फोग्राफिक लिन सक्नुहुन्न जुन १,००० पिक्सेल चौडा हुन्छ र आरामसँग ove०० पिक्सेल चौडाई क्षेत्रमा सर्न सक्दछ।
Zmags दर्शक उद्धार गर्न! एक iframe प्रयोग गरेर, हामी सजिलै यसलाई मा इन्फोग्राफिकको साथ 1 पृष्ठ दर्शक डिजाइन गर्न सक्छौं। हामी वेबसाइटमा फिर्ता दर्शक हेडरमा लिंक पनि थप्न सक्छौं! कोड सरल छ ... चौडाई र उचाई सेट गर्नुहोस् तपाई कसरी दर्शकलाई प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ।
"पूर्ण स्क्रीन टगल गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं इन्फोग्राफिकलाई पूर्ण स्क्रीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र सबै विवरणहरू हेरेर पूम र जूम गर्नुहोस्। यस विधिको अर्को ठूलो फाइदा यो हो कि तपाईं तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातालाई दर्शकमा थप्न सक्नुहुन्छ र हेराईहरूको संख्या हेर्न सक्नुहुन्छ!
तपाइँको सोल बेच्न प्रायोजनलाई समर्थन गर्दै
अक्टोबर 3, 2012 बिहान 11:28 बजे
नमस्ते साथीहरू, कोडी यहाँ, डेलिभ्राबाट। म यस लेखको लागि डगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा सबैलाई थाहा दिनुहोस् कि हामीले तेर्सो इन्फोग्राफमा उत्कृष्ट प्रतिक्रिया देख्यौं। कहिलेकाहीँ केहि फरक, आफैंमा, मानिसहरूको चासोको कुरा हो। यसले मद्दत गर्दछ कि इन्फोग्राफ धेरै सुन्दर र जानकारीमूलक छ। Zmags दर्शक एक जीवनरक्षक हो र सबै प्रकारका उपकरणहरूमा राम्रो काम गर्दछ (डगबाट अर्को उत्कृष्ट सुझाव)।
धन्यवाद कोडी! र इन्फोग्राफिकमा ठूलो काम!